Halyayga Arsenal Ee Ian Wright Oo Unai Emery U Soo Jeediyay In Uu Saddexdan Xidig La Soo Saxiixdo. - Gool24.Net
Khabiirka kubbada cagta BBC ahna halyaygii hore ee kooxda Arsenal ee Ian Wright ayaa Unai Emery u soo jeediyay in uu saddex ciyaartoy oo muhiim ah la soo saxiixdo.
Ian Wright oo si fiican u fahmaya dhaqaalaha kooban ee ay maamulka kooxdiisii hore ee Arsenal suuqa la galaan ayuu soo xulay saddex ciyaartoy oo aan qiimo ahaan qaali badan ahayn balse tayo ahaan kooxda caawin kara.
Laba ka mid ah saddexda ciyaartoy ee uu Ian Wright doonayo in ay Arsenal la soo wareegto ayaa ka tirsan kooxda Premier League ee Leicester City halka midka saddexaad uu ka tirsan yahay kooxda Lille.
Ian Wright ayaa aaminsan in difaaca bidix ee kooxda Liecester City ee Ben Chilwell, Youri Tielemans oo Leicester City amaah ku jooga balse ay kooxda Monaco iska leedahay iyo waliba Nicolas Pepe ay yihiin saddexda ciyaartoy ee ay tahay in ay Gunners la soo wareegto.
Ian Wright oo arimahan ka hadlaya ayaa yidhi: ” Qof la mid ah sida Ben Chilwell- Isagu waa nooca difaaca bidix kaas oo kulan kastaba ka sii fiicnaanaya. Isagu hadda waa xidig heer caalami oo England ah. Waa qof aan hubo in la raadsan doono”.
Ian Wright oo ka hadlaya xidiga labaad ee uu Arsenal la doonayo ayaa yidhi: “Kadib waxaa jira Youri Tielemans, waxa uu ka yimid Monaco. Isagu amaah ayuu Leicester City ku joogaa- isagu waa qof kaas kooxo badan lala xidhiidhinayay, laakiin isagu waa qof aad doonayso in aad haysato”.
Xidiga saddexaad ee uu Ian Right la doonayo Emery ayuu ku yidhi: “Iyo Nicolas Pepe oo jooga Lille. Nooca garabkaas ah ee leh awooda, xawaaraha iyo farsamada- kuwaasi waa nooca ciyaartoyda ah ee xaqiiqdii koox kastaba horumarin kara, haddii aan gabi ahaanba daacad noqdo”.
“Iyagu waxay ku jiraan da’da ay sanado dhawr ah halkaas ku joogi karaan, sidaa daraadeed kaasi waa liiska riyada haddii aan gabi ahaanab daacad ahaado” ayuu Ian Right hadalkiisa ku soo xidhay.
Arsenal ayaa kaalinta shanaad kaga dhamaysatay Premier League xili ciyaareedkii ugu horeeyay ee Unai Emery waxaana la filayaa in xagaagan uu isbadal samayn doono.